Igwe ojii Mammatus: njirimara, mmalite na nguzobe | Netwọk Mgbasa Ozi
Dị ka anyị si mara, na ihu igwe na-eji ụdị igwe ojii dị iche iche amata ụfọdụ amụma ihu igwe n'ihi oge ahụ. Typedị igwe ojii ọ bụla nwere ihe na-egosi ya na mmalite ya. Otu ígwé ojii kachasị dị ebube bụ mammatus ojii. Ha bụ usoro igwe ojii dị iche iche na-anaghị ahapụ onye ọ bụla. Ma ndị na-amụ amụ na ndị ọkachamara banyere ihu igwe na-a attentiona ntị ma na-ese foto nke usoro ndị ọzọ dị iche iche nke igwe ojii mammatus nwere.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị banyere mbido, njirimara na amụma nke igwe ojii mammatus.
2 Kedu igwe ojii mammatus
3 Ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke mammatus ojii
4 Nkọwapụta na akara ngosi
N'okwu a ọ bụghị ụdị igwe ojii, mana atụmatụ ya nwere ike kachasị mkpa. Enwere otutu ndi mmadu ndi mmadu juru site na ihe ndi ozo di iche iche. Ma ndị na-amụ amụ na ndị ọkachamara n'ihe banyere ihu igwe na-etinye uche nke ọma n'ụdị igwe ojii a yiri nnukwu mmiri nke na-apụta mgbe ụfọdụ na mbara igwe. Otu n’ime ihe atụ kachasị amara nke igwe ojii mammatus bụ nke onyonyo gbasara ihu igwe nke NASA weghaara na Nebraska mgbe oke mmiri ozuzo gasịrị na 2004. Foto a ghọrọ otu n’ime ndị kachasị egosi maka ngosipụta nke igwe ojii a.
Nhazi ọkwa dị ugbu a dị na igwe ojii nke nwere usoro 10, ụdị 14 na ụdị 9, na mgbakwunye na igosipụta atụmatụ mgbakwunye dị iche iche, bụ igwe ojii mammatus. Ma ọ bụghị ụdị igwe ojii kama ọ bụ ụzọ isi gosipụta ntọala nke ọtụtụ ụdị na otu ụdị. Thedị niile metụtara ya bụ ihe ndị a: cumulonimbus, altocumulus, altoestratus, cirrus, cirrocumulus, na stratocumulus. Ha niile nwere ike ịmụta ụdị a pụrụ iche nke na-etinye ntanye ntanye dị ka nnukwu ma ọ bụ obere akpa ndị kwụgidere na mbara igwe. Ọtụtụ na-ejikọ ya na mammae nke anụmanụ na-egbu ara, ya mere aha ya.
Kedu igwe ojii mammatus
Anyị ga-ahụ ụdị ụdị nke ụdị ndị a nwere dabere na ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke ikuku. N'ọtụtụ oge, ha na-apụta n'akụkụ fọdụrụ nke oke ifufe tozuru etozu, nke pụtara na ha na-apụ apụ site na onye na-ekiri ya n'akụkụ kachasị ọrụ ya. Ọtụtụ n'ime ebe kwekọrọ na ara nwere ike hụrụ n'ime mmepe n'ígwé ojii. Ugboro ndị a igwe ojii na-eru nnukwu nnukwu vetikal na-ahụkarị ihe ụdịdị anvil.
Ọ bụ n'ebe ndị dịkarịsịrị anya site n'akụkụ igwe ojii na-arụ ọrụ, nke bụ nke nwere ike mgbago elu, na ikuku ikuku na-apụta. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị mere na ọ na-akpata ịrị elu nke ara ndị a na-adọrọ adọrọ na njirimara nke igwe ojii a.
N'ime igwe dum, anyị nwere igwe ojii dị iche iche nke nwere usoro na-eyi egwu n'ọtụtụ ọnọdụ. Igwe ojii Mammatus nwere ngwụcha na-enweghị ngwụcha nke na-etolite n'ihi na nkwekọrịta nke ike vetikal downdrafts nke ikuku. Ha abughi igwe ojii nke onwe ha puru iru ma buru udiri udi nke ozo, kama enwere ike kporo ha site n'igwe ojii ndia ekwuru n'elu. Mgbe obula enwere uzo ozo nke ghagidere ya site na nbili okike ya, elu ala a gha eme ka otutu uzo ma obu ara ndi nyere igwe ojii a.
Otu n'ime usoro kachasị mma ma dị egwu pụtara mgbe emepụtara downdraft na igwe ojii cumulonimbus dị n'etiti. Igwe ojii ndị a na - adịkarị ka anvil ma ọ bụ ndị na - emepụta mammatus kachasị dị egwu. Ọ bụkwa na site na ígwé ojii ahụ ka ha na-amalite ịdabere na lumps ndị dị egwu nke kwesịrị ka a hụ ha.
Ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke mammatus ojii
Anyị ga-ahụ ihe ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mkpa ga-abụ maka nguzobe igwe ojii mammatus. N'ime otu kpochapụwo ụdị sitere na ụdị ụdị. Igwe ojii niile na-etolite mgbe ikuku na-ekpo ọkụ nke pere mpe karịa ikuku oyi na-ebili. Ikuku a na ebili dị ka a ga-asị na ọ bụ ikuku nke mmiri. N'ihi nke a, ikuku na-ekpo ọkụ nke a kwakọbara na alụlụ mmiri na-ejedebe mgbe ọ na-abanye n'ikpere oyi ndị ọzọ na ọnọdụ okpomọkụ na-ebelata na elu. Nke a bụ otu esi ejikwa ya na-etolite micro ụmụ irighiri mmiri nke n'aka nke ya na-enye ike ọkụ ahụ na gburugburu gburugburu n'ihi okpomọkụ nke odide nke na-eme ka igwe ahụ na-agbatị karịa ka usoro nke ịrịgo elu na-aga n'ihu.
Okpomọkụ na-ewepụta n’afọ odide bụ otu ihe anyanwụ na-agwakọta ka ọ ghara isi n’otu ndapụ mmiri ahụ kupụ. Nke a ka amara dị ka latent okpomọkụ nke evaporation. Ihe a na-ekpo ọkụ dị ezigbo mkpa ma na-eme ka ụgbọ elu ikuku na-arị elu na-agba ọsọ ọsọ karịa 100 kilomita kwa elekere., na-eru ịrị elu troposphere ruo ihe karịrị kilomita 15 n'ịdị elu. Ọ bụrụ na ikuku siri ike dị na elu nke 5 ma ọ bụ 10 kilomita, igwe ojii ga-etolite ruo mgbe ọ ruru ikuku nke ikuku oyi na-ada gburugburu igwe ojii, na-ebute ụdị anvil nke igwe ojii cumulonimbus.
Mammatus dị obere ma dị egwu. Ha na-eme mgbe ụfọdụ mgbe ihe omimi ikuku siri ike, dị ka ala nke igwe ojii cumulonimbus. Ọ bụ ezie na ha na-atụ ụjọ, ha adịghị emerụ ahụ.
Nkọwapụta na akara ngosi
Akụkụ nke igwe ojii nkịtị nwere ike ịba ụba nke ukwuu na mpaghara ikuku ikuku. Na mpaghara ndị dị anya site na mmelite siri ike, ikuku jupụtara na iru mmiri wee malite ịgbadata na kristal micro nke ikuku ikuku na-ebu. Site ebe a anyị na-achọta nguzobe nke ara. Otu ntopute ọ bụla na-egosi otu n’ime ikuku ikuku ndị a n’okpuru igwe ojii.
Banyere omenaala, ọnụnọ igwe ojii a anaghị egosi mmiri ozuzo ma ọ bụ mgbanwe ndị ọzọ dị egwu ihu igwe. Ihe omume a dicha nma ma dikwa nma karie na mgbe odida anyanwu puru iche mgbe anyanwu chapuru achapu ma mekwa ka uzo nile di iche.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere igwe ojii mammatus na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Igwe ojii Mammatus